Anyị nwalere Tineco iFloor 3 na A11 Master + ndị na-ehicha agụụ, ihe nhicha ma na-ehichapụ na-enweghị eriri | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwalere Tineco iFloor 3 na A11 Master + ndị na-ehicha agụụ, ihe nhicha ma na-ehichapụ na-enweghị eriri.
Luis Padilla | | Ngwa, Nyocha
Anyị nwalere ngwaahịa abụọ nke Tineco: iFloor 3, maka ikpochapu na ikpochapu ala na arụmọrụ dị egwu, na A11 Master +, na nnwere onwe dị mma na ụdị ngwa dị iche iche gụnyere na igbe.
1 Tineco iFloor 3: ikpochapu na ichapu
Tineco iFloor 3: ikpochapu na ichapu
Ndị na-ehichapụ ihe na-enweghị eriri agbanweela echiche nke otu anyị si eji ụdị ngwa ụlọ ndị a. Mgbe niile na njikere na njikere iji ọbụna n'oge a na-atụghị anya ya, na-enweghị eriri ọgbaghara na njikwa dị mfe. Ma gịnị na-eme mgbe ihe dara n'ala nwere mmiri mmiri? Gịnị ma ọ bụrụ na, na mgbakwunye na nsị nke ihe ndị siri ike, anyị chọrọ ihicha ala? Ọfọn, nke ahụ bụ kpọmkwem ebe ebe a na-ekpo ọkụ ọkụ Tineco iFloor 3 na-abata, n'ihi na ọ bụ ihe nhicha ọkụ-mop nke jikọtara omume ọma nke onye na-ehicha ihe dị ike na mop nke ga-ahapụ elu nke ị sachapụrụ sachaa.
Site na njirimara kachasị mma enwere ike jụọ maka ngwa ọrụ nke otu a, ihe nhicha iFloor 3 a na - aghọ zuru okè na otu maka ulo obula:
150W moto maka onye na-ehichapụ ọkụ na-enweghị ike (78 dB)
Nwere ikike nke 25 nkeji na batrị 3000mAh na-agbanyeghachi ọkụ na 4 awa
500ml unyi tank
-Kpụrụ nhicha onwe gị ka ị wee ghara iji aka gị ruru unyi
Nchaji na onwe-ihicha isi
Usoro nhazi atọ, yana HEPA iyo (gụnyere nnọchi)
Gụnyere ihe nhicha mmiri iji tinye mmiri na nhicha nhicha
Otu n’ime ihe na-enye m nsogbu n’obi bụ mgbe m hụrụ ụdị ebe a na-ehicha ihe bụ ịdị ọcha nke ya. Gwakọta unyi na mmiri abughi ezigbo echiche na ndị na-ehicha agụụ, amaghịkwa m etu esi edozi nke a na iFloor 3. Agbanyeghị, ọ naghị ewe m oge ịchọpụta, n'ihi ekele tankị abụọ (dị ọcha na nke ruru unyi) na sekit abụọ nke etinyere, unyi adighi erute ebe ozo ozo di na nhicha ahihia n'azu.
Iji ya dị nfe dị ka ijuju mmiri na mmiri dị ọcha, na-agbakwunye okpu nke ihe nhicha nhicha, wepụ ya site na isi na ịpị bọtịnụ. Ihicha ya mgbe ejiri ya eme ihe adịghị mgbagwoju anya, naanị ị ga-ewepu mmiri mmiri ahụ ruru unyi, hichaa ya ma tinyeghachi ya n'ọnọdụ ya. Usoro nhicha onwe ya na-emekwa ka ihe ndị na-emegharị ahụ na isi ihe dị ọcha., ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike iwepu ala mgbe ịchọrọ ya iji kpochaa ya nke ọma. Ọ bụghị ngwaọrụ nke chọrọ nrụzi dị ukwuu iji kwadobe ya oge niile, nke ahụ nwekwara nnukwu ekele.
Ngosipụta dijitalụ nke ọ gụnyere gụnyere nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọ na-egosi data dị mkpa dị ka batrị fọdụrụnụ, ọsọ ọsọ ọsọ (enwere ike ijikwa ya na bọtịnụ na njikwa), ọnọdụ nke tankị abụọ na jams nwere ike ịdị na nhicha nhicha, na mgbakwunye mgbe usoro nhicha onwe ya na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na nke a, anyị na-agbakwunye njikwa nwayọ nwayọ n'agbanyeghị agbanyeghị ka onye na-ehicha agụụ, na oke ibu dị Nke ahụ ga - enyere gị aka iwere ya ebe ọ bụla, iFloor 3 a bụ ngwa nhicha mara mma maka ụlọ gị.
Akụkụ ọzọ na-echegbu m bụ otú m ga-esi na-emeso ala ụlọ ahụ, nke dị oke nro dịka ọ bụ osisi parquet. Enweghị nsogbu, n'ihi na ihe na-eme microfiber dị nro n'ezie, na nsachapu nke ọ na-arụ na-ahapụ naanị ntakịrị mmiri nke na-ewe naanị sekọnd ole na ole iji kpoo. Enwere ike iji ya na ụdị ụdị ọ bụla: marble, osisi, sịntetik, linoleum, wdg. Onye nrụpụta anaghị atụ aro ka ejiri ya mee ihe na kapeeti ma ọ bụ ebe nwere oke ike n'ihi nsonaazụ ikpeazụ nwere ike ọ gaghị akacha adaba.
Naanị "mana" enwere m ike itinye ihe nhicha-mop a bụ nke ahụ nnwere onwe ha zuru oke iji nwee ike ihicha ụlọ ma ọ bụ nke dị larịị, ịbụ ihe dị mkpa mgbe niile iji mee ya n'akụkụ abụọ. Ma nke bụ eziokwu bụ na ịdị mfe nke ojiji na ihe magburu onwe ya pụta n'ihi na a mgbaka-aga n'ime ndabere, nke anyị ga-ịgbakwunye obere mmezi chọrọ. Ọnụ ya bụ € 329 na Amazon (njikọ)
Onye ọzọ na-ehicha ikuku na-enweghị eriri bụ, a priori, ọtụtụ ihe ndị ọzọ agụụ Cleaner ọ bụ ezie na na nnọọ ole na ole ịtụnanya n'ime igbe. Ike mmịpụta na nnwere onwe dị ukwuu bụ njirimara ya bụ isi, nke anyị nwere ike ịgbakwunye ndepụta ogologo nke ngwa ndị etinyere na igbe:
120W agụụ ike na obere mkpọtụ
4 usoro nzacha, tinyere HEPA iyo
600ml unyi tank
Nhicha isi na Ikanam ọkụ iji mee ka ebe gbara ọchịchịrị nwuo
Nchaji isi na ohere maka ngwa na chaja ọzọ maka batrị ọzọ
Batrị abụọ maka nkeji 50 nke nnwere onwe zuru ezu (25 × 2)
Abụọ zuru ezu isi na ịchọ nlezianya na miri ihicha ahịhịa
Nnọchi microfiber nyo
Obere isi maka ihicha sọks, akwa ụra, wdg.
Gbasa ikpere iji ruo ebe siri ike
Mgbanwe n'ikpere aka
Brush isi, warara ọnụ ...
Dịka ị pụrụ ịhụ, o siri ike iche echiche banyere ihe na-esoghị na igbe nke A11 Master + a. Ihe kachasị dị egwu bụ batrị abụọ, nke ekele n'eziokwu ahụ bụ na ntọala nwere ohere ọzọ maka batrị nke abụọ ahụ, na-ekwe nkwa na ị nwere nkeji 50 nke nnwere onwe dịnụ, karịa ihe zuru oke maka ihicha ụlọ ahụ dum. Na mgbakwunye, eziokwu ahụ bụ na enwere ike iwepu batrị na ọ bụrụ na ọ mebie, ị nwere ike ịzụta batrị ọzọ ma ọ bụghị ihe nhicha ọkụ zuru oke.. A na-enwekwa obi ekele isi abụọ zuru ezu, ebe ụdị ndị ọzọ na-enye gị ihe mgbakwunye ọzọ, Tineco ahọrọla ime ka ihe dịrị anyị mfe ma gụnye isi abụọ, iji gbanwee site n'otu gaa na nke ọzọ site na ịpị, na-enweghị ịwepụsị ihe ndị ahụ.
Onye na-ehicha ihe na-ekpo ọkụ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, na njikwa zuru oke ọbụlagodi na otu aka, yana ọtụtụ ngwa dị iche iche gụnyere na-enye gị ohere iru nkuku kachasị ụlọ gị: n'okpuru ma ọ bụ karịa kọbọd, n'etiti oche sofa ma ọ bụ n'akụkụ nkuku ahụ na-enweghị iwepu ya. Nhicha dị ezigbo mma, na tank buru ibu zuru ezu ịtọ naanị na njedebe.
Onye na-ehichapụ ihe na njirimara kachasị mma ị nwere ike ịchọta na ya, nke ahụ gụnyekwara ihe niile ịchọrọ iji nweta ọtụtụ uru na ya, gụnyere batrị ọzọ. Maka matriculation nke nsọpụrụ agaraghị enwe akpa iji chekwaa ngwa niile agunye. Mgbanwe, ìhè, obere mkpọtụ ma dị ike, Nke a Tineco A11 Master + nwere ike zụrụ na Amazon maka € 389 (njikọ)
iFloor 3 na A11 Master +
Maneuverable na mfe iji
Nnukwu ihe nkwụ ruru unyi
Nchaji ntọala na oghere maka ngwa
Ezigbo nnwere onwe nke A11 Master +
Nnukwu ngwa dị iche iche gụnyere na A11 Master +
Ezigbo obodo nke iFloor 3
A ga-enwe ekele maka akpa nchekwa ngwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Anyị nwalere Tineco iFloor 3 na A11 Master + ndị na-ehicha agụụ, ihe nhicha ma na-ehichapụ na-enweghị eriri.
Sonos na-enye Roam ọhụrụ ya, ikuku na ndị ọzọ enwere ike ibugharị
Mmechi nke Lectulandia: usoro 5 kachasị mma